Posted on November 21, 2013 November 20, 2020 by csr 1687
KUMAMiriyoni anotambura muPhilippines, chero rubatsiro rubatsiro rwakakura. Asi rubatsiro rweRedwell rwuri kukweretesa ruoko nenzira chaiyo - nekutumira 250 mawiricheya kunyika yakaparadzwa.
Pakutanga mwedzi uno Dutu reHaiyan, rinozivikanwa muPhilippines seTyphoon Yolanda, rakarova zvitsuwa nemhepo inosvika ku150mph uye yakatsiga, yakasimba mvura.
Vanhu vanosvika zviuru zvina vanozivikanwa kuti vakaurayiwa, zvichiita dutu rechipiri rakaipisisa kukunda nyika munhoroondo yayo.
Sekureva kwevakuru veUN, vangangoita mamirioni gumi nerimwe vanhu vakavhiringwa uye vazhinji vakasiiwa vasina pekugara.
Motivation, iyo yakavambwa muna 1991, yakatanga chinhu chitsva dambudziko rinopindura wiricheya kubatsira kuponesa hupenyu panoitika njodzi.
Iyo yakanyatsogadzirirwa kushandiswa kwenguva pfupi-kwakasiyana mumatambudziko akasiyana-siyana uye nemamiriro ekukurumidzira, kubva kunjodzi dzinongoitika dzega kusvika kumisasa yevapoteri, uko kune kudiwa kukuru kwekukodzera mavhiripu.
Kukurudzira vanotarisira kuti masangano anobatsira achakwanisa kuendesa chigaro mumamiriro ezvinhu akaita sedutu Haiyan, uko kune vakakuvara zvakaipisisa uye remara vari pangozi yakanyanya.
Sangano rine akapiwa 200 of itsva dhizaini kune Handicap International uye 50 kuenda kuJohanniter International Rubatsiro.
Nezuro husiku, yakagamuchira iyo Nhau dzakanaka kuti Johanniter ichave ichiendesa yayo mavhiripu nemugovera nechinangwa chekuvaisa pasi kune vanhu vanovada nekukurumidza zvinogoneka mushure maizvozvo.
Handicap International ichiri kusarudza kuti ndeipi uye riinhi inogona kuisa zvigaro zvekushandisa.
Co-muvambi weMotivation, David Constantine MBE, akati: "Akaremara vanhu vanogona kuve vanotambura kwazvo munjodzi uye kazhinji vanonyimwa rubatsiro rwekununura uye kubvisa.
"Kurasikirwa nenhengo dzemhuri kana vachengeti, kurasikirwa michina yekubatsira zvakaita se mavhiripu uye kushayikwa kwehutano kunogona kukuvadza.
"mavhiripu "inogoverwa mushure mekuitika kwenjodzi dzinongoitika dzega dzinowanzova macheya ezvipatara zvechipiri, izvo zvisingawanzo kusangana nemitemo yepasi rose uye kazhinji zvinosvika zvanonoka kuita mutsauko."
MuHaiti, inofungidzirwa vanhu mazana maviri ezviuru vakasara Akaremara zvichitevera kudengenyeka kwenyika muna 2010.
VaConstantine vakawedzera kuti: "Sachigaro asiriye - kana kuti haana sachigaro zvachose - anogona kusiya vakuvara vatadza kuwana rubatsiro rwekugara senge pekugara, chikafu nemvura.
"Uye, kwenguva refu Akaremara, kukakavara kana njodzi inogona kuuraya. "
VaConstantine vaingova nemakore makumi maviri nemaviri apo, semudzidzi aifamba-famba kuAustralia, paakarwadziwa mutsipa mutsaona yekudonha yakamusiya akaoma mitezo.
[btn link = "http://www.bristolpost.co.uk/mavhiripu-OFFER-VITAL-AID-VICTIMS-TYPHOON / story-20109868-detail / story.html "color =" orange "target =" _ blank "] Verenga Chinyorwa Chizere [/ btn]
Papa Francis Vanotambira Mazana neUrema